SABOOL SAD MA LEH!! (Sheeko gaaban oo xiiso badan) | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » SABOOL SAD MA LEH!! (Sheeko gaaban oo xiiso badan)
SABOOL SAD MA LEH!! (Sheeko gaaban oo xiiso badan)
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 19-07-16 9:02 AM Waa Xilli Habeen ah oo aad u qaboow, Roob xoog leh baa da’aya, Dadkuna qaarkood iyagoo Dalado wata ayeey cararayaan oo Biyaha Roobka ka gabanayaan, qaar kalena Jaakadaha iyo Dharka culus ee ay xiranyihiin bay iskusii daboolayaan si ay Dhaxanta uga gaashaantaan.
Waxaa halkan taagan Nin la moodo Sanam ama Tiir, Taagnidiisa darteed. Wuxuu wataa Dhar aad u Muuqaal dilan oo Wasaq iyo Uskag miiran ah. Dhabanadiisa Ilin Indhaha kasoo hoortay baa diirineysa. Dadkuna dhinacyadiisa ayeey marayaan iyagoo qaarkood moodaya inuu Sanam yahay.
Waxaa si yasmo ay ku jirto usoo eegay Nin Wadada marayay oo ku yiri “ War Dhar wanaagsan miyaadan heysan?. Qabso Lacagtan ee Dhar ku iibso. Wixii kalood dooneysana ii sheeg?”. Ninkii Wadada dhex taagnaa ayaa ku War-celiyay “ waxaan kaa doonayaa kaliya inaad iga hor dhaqaaqdo!!”. Kii yasmada iyo jees-jeeska u hadlayayna Cod dheer buu ku yiri “ War na dhaaf wax Waalan baad tahay!”.
Ninkii Taagnidiisa lala yaabanaa ayaa markuu Roobku qayoostay soo dhaqaaqay oo soo abbaaray Hoteel kuwa caanka ah ku jira Wabigana ku teydsan. Ninkii soo dhawaynta qaabilsanaa ayaa isku dayay inuu horjoogsado Ninkan Dharka wasaqeysan wata, wuxuuna u sheegay in Hoteelka aan Tuugsi iyo wax waydiisasho laga ogoleyn. Balse Ninkii ayaa isagoo arrintaas ka jawaabaya wuxuu Soo dhaweeyihii tusay Furaha Qol ka mid ah Qolalka ugu Lacagta badan Hoteelka oo uu Dhar ku wasaqluhu kireystay.
Shaqaalihii Hoteelka oo aad u yaaban baa wada eegay Ninkan Dharka uu wato aanay xitaa kuwa Xoogsatada ahi isku quurin, ee hadana Hoteelka sidaas u qiimaha badan iyo Qolkaas qaaliga ah kireystay. Iyagoo sidii u yaaban ayuu isla Ninkii oo sidii hore ka duwan soo baxay. Dhar kuwa ay Madaxdu xirtaan buu kusoo labistay, Gaari aad u qaali ahna wuu lasoo baxay.
Ninkii soo dhaweeyaha Hoteelka ahaa ayaa u yimid Nikan Labiska sareeya, wuxuuna yiri isagoo ka daba jiitamaya “ Mudane, Mudane!! Maxaan kuu qabtaa? Gaariga Albaabkaas kala bax. Xagaas Furaha dhigo. Shaaha halkan ka cab. Kabaha Dhulka ha isaga wasaqeyne ii sug aan Roog kuu dhigee…”.
Ninkii oo Qolsaya ayaa isna yiri “ Waan gartaye imisa Lacag ah baa kugu filan? Miyaan kuu kordhiyaa? Waayahaye bal intaan qaado.”. wuxuuna waydiiyay “Haye Hoteelkan Tuugsiga iyo Dad wax waydiisashada lagama ogola miyaa?”.
Mar kale ayuu Ninkii Hantiilaha ahaa yiri “Balaaya idinku dhacday! Dadka waxaad ku qiimeysaan Hantidooda inta ay dhantahay. Waxaase nasahan oo Awood leh Ilaahaygi Habka aad adiga igula dhaqmeyso badalay Daqiiqado gudahood”.
“Xilli Qaboowga marka la gaaro waxaan isku dayaa inaan arko Dareenka Saboolka. Dhar wasaq ah baan Roobka la tagaa anigoo doonaya inaan dhibaatada ay Dadka Saboolka arkayaan dareemo” ayuu Ninkii sii yiri.
Qofkii aan Shilin heysan Sharaf looma yeelayo, waxaaba la moodaa in Gacan siinta Qofkaas ay Ceeb tahay! Hadii aan la kaalmeyneyn walba maxaa loo yasayaa oo Erey xun loo dhahayaa, ileen Ereyga fiican isagaaba Sadaqa ahe (الكلمة الطيبة صدقة)